डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO • DutchtownSTL.org मा सोल अजेटेका
सोल अजेटेकाले प्रामाणिक मेक्सिको सिटी खाना बनाउँदछ र उनीहरूको होराचहरू र विशाल क्वेस्डिलाहरूका लागि राम्ररी परिचित छन्। मा सोल Azteca को बारे मा अधिक पढ्नुहोस् पर्व म्यागजिन.
१११ एस ब्रॉडवे
सोल Azteca, 4232२XNUMX२ एस ब्रॉडवे
यस स्थान साझेदारी गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जनवरी 31st, 2021 .
DutchtownSTL.org स्थानहरू रेस्टुरेन्ट सोल Azteca